Cele Love, Author at CeleLove
Articles by Cele Love
ပျောက်ကွယ်လုနီးပြီ ဖြစ်သော မြန်မာ့ရှေးသုံး အတိုင်းအထွာများအကြောင်း…
January 25, 2020 Cele Love 0
ပျောက်ကွယ်လုနီးပြီ ဖြစ်သော မြန်မာ့ရှေးသုံး အတိုင်းအထွာများအကြောင်း… မြန်မာအတိုင်းအထွာ ဇယားတွေထဲမှာ “မိုက်”တို့ “ထွာ”တို့ တော့ပါပြီး “ဆေးတံတို ၊တစ်ညိုလောက် ရော့သောက်တော့ ပေး” ဆိုတဲ့ကဗျာထဲက “ညို”ကျတော့ မပါကြဘူး …။ တစ်ခါက ဦးကြီးတစ်ယောက်က သူ့သနပ်ခါးပင် လုံးပတ်ဟာ ထွာဆိုင်လောက်ရှိပြီ လို့ပြောတာနဲ့ ကျနော်က အချင်းပြောစမ်းပါ […]
လူတိုင်းခံစားရလေ့ရှိတဲ့ နှာပိတ်တာကို ၁၅မိနစ်အတွင်း ပျောက်ကင်းအောင် ပြုလုပ်နည်း
လူတိုင်းခံစားရလေ့ရှိတဲ့ နှာပိတ်တာကို ၁၅မိနစ်အတွင်း ပျောက်ကင်းအောင် ပြုလုပ်နည်း နှာခေါင်းပိတ်တာကို ခံစားရတဲ့လူတိုင်းဒီခံစားချက်ကိုပျောက်ချင်ကြမှာပဲ။ဘယ်လိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျောက်သွားအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် … ။ (1) တကယ်လို့ ဓာတ်မတည့်တာကြောင့် နှာရည်ယိုတာဆိုရင်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတော့ မြန်လာပြီဆိုရင်တော့ သင့်နှာခေါင်းထဲကနှာရည်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်း ၁၅မိနစ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ဓာတ်မတည့်တာတွေကိုရှင်းပစ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ (2) သင့်နှာတံကိုနွေးထွေးအောင်ထားပါအဝတ်နွေးနွေးကိုယူပါ။မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ထဲမှာထည့်ပြီးနွေးအောင်လုပ်လို့ရသလို ရေနွေးထဲမှာစိမ်ပြီးတော့ […]
Corona Virus ကူးစက်ခြင်းမခံရ‌အောင် ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာပါ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်ပြည်နယ်က ဟွာနန်ပင်လယ်စာဖြန့်ချီရေးဆိုင်က အလုပ်သမားတွေနဲ့ ဖောက်သည်တွေဆီမှာစတင်တွေ့ရှိရတဲ့ corona virus ဟာအရင်ကတခါမှမကြုံတွေ့ရဖူးသေးတဲ့ အမျိုးအစား (novel virus) လို့သိရပါတယ်။ ပင်လယ်စာကနေစတင်ကူးစက်ဖြစ်ပွားပြီး လူလူချင်းကူးနိုင်တယ်လို့လည်း တရုတ်နိုင်ငံ national health commission ကအတည်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ […]
ကိုယ့်ချစ်သူကို ပက်ပက်စက်စက် အနိုင်ယူနည်း… (1) သူ့ကို ဘယ်တော့မှ ဦးစား မပေးပါနဲ့ …! ဥပမာ – မုန့်​ဆိုင်​ထိုင် စားပြီးတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကိုယ်က အရင်​ဦးဆုံး ပိုက်​ဆံ ထုတ်​ပြီးသာ ရှင်းပြစ်လိုက် (2) စကားကို တစ်ခွန်းထက် ပိုပြီး မပြောခိုင်နဲ့ …! […]
အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ စိုက်ထားသင့်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်အသုံးဝင်ပုံ (၈) မျိုး
အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ စိုက်ထားသင့်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်အသုံးဝင်ပုံ (၈) မျိုး အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ စိုက်ထားသင့်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်အသုံးဝင်ပုံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို ၂ လက်မအရွယ် ဖြတ်ပြီး မီးကင်တယ် ဆိုရုံလေး ကင်ပါ။ ငါးပြားလောက် စားပါ၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်၊ ရောဂါ ဆိုးရင်တော့ နေ့စဉ် […]
January 24, 2020 Cele Love 0
သံစဉ်မောင်ရဲ့ သိန်းထောင်ချီ ခြူစားခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ ဦးကျော်ဟိန်း(အကြောင်းရာအပြည့်စုံ) နေစမ်းပါဦး။ HD ပုံလေးတစ်ပုံထွက်လာတာနဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေကြတာတုန်း။ (၃)နှစ်လောက် တွဲထားတာနဲ့ ဟိုနေဒွေးဆိုတဲ့ကောင်က ဘာတွေကြောက်လန့်ပြီး ဖြေ ရှင်းချက်တွေ ထုတ်နေတာလဲ ရှင်းပြကြပါဦးဟ …။ သံစဉ်မောင်ဆိုတာဘာလဲ… ဘယ်လောက်ထိ ဆရာကျလဲဆိုတာ မသိပဲ စွတ်သနားနေတဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီး သူ့အကြောင်း နဲနဲရေးချင်လာလို့ […]
ညအိပ် မပျော်သူတိုင်း ရောဂါ ဖြစ်နေသူ ပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မပျော်လျှင်….
ညအိပ် မပျော်သူတိုင်း ရောဂါ ဖြစ်နေသူ ပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မပျော်လျှင်…. ညအိပ် မပျော်သူတိုင်း ရောဂါ ဖြစ်နေသူ ပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မပျော်ဘူးဆိုလျှင် (၁) ဖီးကြမ်း ငှက် ပျော သီး မှည့် စား ပါ ။ အိပ် စက် ခြင်း တွက် […]
(၁၆)နှစ် အရွယ်သမီးလေးက မိန်းမချင်းကြိုက်နေလို့ ဆိုပြီး ရက်စက်ယုတ်မာခဲ့တဲ့ ဖခင်တစ်ဦးရဲ့လုပ်ရပ်
(၁၆)နှစ် အရွယ်သမီးလေးက မိန်းမချင်းကြိုက်နေလို့ ဆိုပြီး ရက်စက်ယုတ်မာခဲ့တဲ့ ဖခင်တစ်ဦးရဲ့လုပ်ရပ် မိဘဆိုတာ မိမိသားသမီးအပေါ် ဘယ်လိုအနေအထားဖြစ်နေပါစေ မစွန့်ပစ်ရက် မရက်စက်ရက်သူတွေပါ …။ ဒါပေမဲ့ ခုပြောမဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဖခင်တစ်ဦးကနေ မိမိသမီးဖြစ်သူကို ရက်ရက်စက်စက် ပြုလုပ်ဆုံးမခဲ့တာပါ …။ အဲတာကတော့ ၁၆ နှစ်အရွယ် သမီးဖြစ်သူဟာ […]
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်နှံ့ပြီးနောက်တရုတ်တွေရဲ့ အစားသောင်းကျန်းမှု ဗီဒီယိုများ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာ
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်နှံ့ပြီးနောက်တရုတ်တွေရဲ့ အစားသောင်းကျန်းမှု ဗီဒီယိုများ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာ တရုတ်တွေရဲ့ အစားသောင်းကျန်းမှု ဗီဒီယိုများ ဆက်တိုက်ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တိရိစ္ဆာန်တွေမှာသာ ငြိတွယ်ပေါက်ပွားလေ့ရှိပြီး အခုလို လူတွေမှာပါ ကူးစ်ပြီး ပျံ့ပွားနေမှုဟာ အစားအသောက်နဲ့ ပက်သက်လာရင် စည်းမထားပဲ တွေ့မရှောင် စားတတ်တဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ […]
နဖူးပြောင်သူတွေရဲ့ သူများနဲ့မတူဘဲ ကွဲပြားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အားသာချက်တွေ…. နဖူးကျယ်တဲ့သူလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေက ပြောင်ကြီးလို့ ခေါ်ပြီး စနောက်တတ်ကြတာကြောင့် အများစုက ဆံမြိတ်လေးတွေနဲ့ နဖူးကျယ်ကျယ်တွေကို ဖုံးအုပ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ နဖူးကျယ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာရပ်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ဒီလိုထူးခြားချက်မျိုးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါနော်… (၁) ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်တယ် သူတို့တွေဟာ တခြားသူတွေကို […]